फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, कुनको कति ? हेर्नुहोस् Canada Nepal
फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, कुनको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । मंगलबार नेपाल आयल निगमले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।
विज्ञप्ति अनुसार निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लिटरमा दुई दुई रुपैयाँ बढाएको हो ।
अब पेट्रोल लिटरको १ सय १८ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेल लिटरको १०१ रुपैयाँ कायम भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्याँस र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत रहेको छ ।
यो मूल्य मंगलबार राती १२ बजेबाट लागू हुनेछ। यसअघि फागुन १७ गते निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई दुई रुपैयाँ बढाएको थियो।
चैत्र ३, २०७७ मंगलवार २०:३८:१० बजे : प्रकाशित